Wholesale Disposable imwechete-chidimbu kusarudzika gown vagadziri uye vanotengesa | qiangwei
Disposable imwe-chidimbu voga gown
1. Yakabatanidzwa yekuzviparadzanisa nguwo, yakagadzirwa nespunlace isina-yakarukwa jira + PE inofema firimu jira, mwenje, inofema, isina mvura, jira jena, gramu uremu 63g / ㎡, hunyoro hwekudzivirira mwero chikamu 4, kushorwa kwemvura> 10Kpa, pamusoro pemvura mwero kuramba 4 .
2. Yese nguvo yakashongedzwa dhizaini inogadzirwa neyekusonesa bhegi, pasina kuvhuvhuta kwetsono, 10-14 tsono yekusiyanisa yega yega 3cm, yunifomu uye yakatwasuka tambo, isina kusvetuka tsono, uye kusarudzika kunoshanda kwezvakanaka zvikamu. Cuff, tsoka uye kapu zvinoshanduka uye zviri nyore kuisa uye kubvisa. Chiuno is elastic tendon, yakakodzera kune akasiyana manhamba ekupfeka.
3. Zipper yepamberi kurovera, mbiri-mativi ekunamatira tepi yekunze yekumonera, yakanaka chisimbiso.
4. Chigadzirwa chakaiswa zvakasununguka, chinoshandiswa kamwe uye chakaparadzwa mushure mekushandisa. Inodzikisira uye inodzivirira nharaunda.
5. Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma, inofefetera uye isina-kupisa pachitonho chemukati, ine nguva yemwedzi makumi maviri nemana.
6. Ndokumbira usimbise nzvimbo yako yekushandisa usati washandisa. Kambani yedu haizovi nemhosva kune chero kukuvara kunokonzerwa nekupfuura mashandisiro kana mashandisiro emiganhu yechigadzirwa ichi.
7. Ichi chigadzirwa chinosvira. Ndokumbirawo ugare kure nekwave kupisa uye vhura moto kana uchishandisa kana kuchengeta.
8. Tarisa chitupa chakatemwa, zuva rekugadzira uye nhamba yebatch.
9. Zvinokurudzirwa kusabata ganda nekupfeka kweanopfuura maawa makumi maviri nemana.
10. Chigadzirwa chakakamurwa kuva XS / S / M / L / XL / XXL, iine moQ yezvidimbu chiuru, zvidimbu makumi mashanu / bhokisi, uye huremu hwakazara hwe0,24kg pachidimbu. Support customization, anogona kupa 2 ivhu, pfupi pakukurukura kutenderera.
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa mumasangano ekurapa kweanorapa varwere, kuwadhi, rabhoritari uye zvimwe zvakajairika zvekuzviparadzanisa unibody kusarudzika mbatya.
Pashure: Outdoor Mabhachi
Zvadaro: Isolate yekupfeka nhanho 1
Chiremba Kuparadzaniswa Gown
Medical Yekudzivirira Nguo
Chiremba Chiremba Gown
Isolate yekupfeka nhanho 1
Isolate yekupfeka nhanho 2